MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: အာဏာသိမ်းဖို့ အခွင့်လမ်းရှာနေပြီလော?
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှ ကြိမ်ဖန်တေသောနိုင်ငံတကာမှ ထောက်ခံသည့် အာဏာသိမ်းသည့် အနေထားသို့ မင်းအောင်လှိုင်တို့ သွားချင်ကြသည်။ သို့သော် လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံတပ်မတော် အကြီးကဲလည်းဖြစ် ၀န်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နေသော ယင်လတ် မှ နောက်တကြိမ် အာဏာ သိမ်းမှု့မျိုးမဖြစ်အောင် ဖန်တီးတာဝန်ယူထားသည့်အနေထားကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာကါ မိမိမှ မြန်မာပြည်အား အာဏာသိမ်းခဲ့လျှင် တွေ့ကြုံနိုင်သော နိုင်ငံရေး အခင်းကျင်းများအား ကြိုတင် သိထားလိုသော သဘောထားလဲ ပါဝင်ခဲ့သည်။
အာဏာရှင်ဟောင်းဦးနေ၀င်းက တိုင်းပြည်အား လိုအပ်သလိုအာဏာသိမ်းနိုင်ရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါဝင် ပြည်ထဲရေ၀န်ကြီး နှင့် အဖွဲ့အား ၁၉၈၈ ဇွန်လတွင် အရေးပေါ်အစည်းဝေးခေါ်ယူခဲ့သည်ကို The Guardian သတင်းစာက ရေးသားဖေါ်ပြသည်။ထို့နောက် တိုင်းပြည်အာဏာမသိမ်းခင်း စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ကြလေသည်။
၄င်းတို့၏ လက်နက်ကိုင် ရဲ ၀န်ထမ်းများမှ တသွေမတိမ်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပါက အမိန့်နာခံမှု
ခဲတလုံးနှင့် ငှက် ၂ ကောင်ကို တခါတည်း ပြုတ်ကျအောင် ထိုးစစ်များခန ရပ်တန့်ပြီး စားပွဲဝိုင်းတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ လှည့်ဖြားခြင်းများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်မှာ လုံးလုံးမရိုးသားသော အကြံစည်သစ်အတွက် ချီတက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကောင်စီ၏ စည်းလုံးရေးအနေထားများကိုလည်း တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် ကချင်ဒေသစစ်ပွဲအပါဝင် ရှမ်းဒေသများအား စစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်ပြခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင် အချင်းချင်း သဘောထားကွဲလွဲရေးများဖန်တီးပြီး ပါတီများအားနည်းလာအောင်ဖန်တီးနေကြသည့် အပြင်၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် ပြည်မတွင်းမှ ပြည်သူများမည်မျှအတွေးမြင်တူညီကြသည်ကို မီဒီယာ နာမည်တုများနှင့် မဟုတ်မ
အတိုက်ခံတို့ အချို့သော အယူဆကွဲလွဲမှုများတွင် မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘက်က တချို့နေရာတွင်
နေကြသည်။ အဆိုပါအချင်းရာသည် မင်းအောင်လှိုင်တို့အဖို့ ပိုကာပိုကာ အသာစီးရနေ၏။
ရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ရပြီး….အာဏာသိမ်းဖို့ အခွင့်လမ်းရှာနေပြီလော? ဟုပင် မေးခွန်းထုတ်
at 10/16/2013 08:58:00 AM